Mba tsy ho haingo ambony tsikoko indray ! • AoRaha
Antenaina tsy ho fisehosehoana amin’ireo vahiny hasaina hanatrika ny fankalazana ny daty nitsingerenan’ny taona niverenan’ny fahaleovantenan’i Madagasikara ny fihetsiketsehana sasany eto an-drenivohitra, amin’izao fotoana izao. Efa nandeha moa ireo ny asa fanamboaran-dalana. Ny arabe mateza no tanjona, na dia izay herinandro maro niaretana ny fitohanana tamin’ireo lalambe maro izay aza. Sao hihaingo ambony tsikoko toy ny tamin’ny fotoana nandraisana ny fihaonana an-tampon’ireo firenena mampiasa ny teny frantsay (frankôfônia) teto amintsika. Tsaroana tsara ny fifehezana ny fifamoivoizan’ireo sarety sy posy tamin’ireo toerana sasantsasany teto Iarivo, taona vitsy lasa izay. Satria resaka sarety sy posy izao no malaza. Betsaka ireo tandrenivohitra sahy miteny fa tsy maninona na taitra tampoka ka mamaky takotra aza ireo mpanatanteraka ny asa fandrindrana ny fifamoivoizan’ireto karazam-pitaterana efa tranainy sy lany andro ary manimba endrika ny tanàna ireto. Tsy lazaina intsony ny fanelingelenana ny fifamoivoizana ataon’ireo andian’olona mitarika sy manosika sarety na posy miaraka amin’izato entana mila hianjera eny amin’ireo mpifamoivoy hafa. Aoka izay ny fitserana sy fanehoana fihetsem-po amin’ity hoe “ny madinika foana no enjehina” e! “iza no hamelona ny fianakavian’ireo mpitarika sarety sy posy” e! “Hangalatra ve izany izy ireo” e! Sy ny sisa… Averina foana fa tsy mitaraina
amin’iza na amin’iza ireo tena fatra-panaja lalàna, nefa mafy ihany koa ny asa fitadiavan’izy ireo isan’andro. Mandoa hetra. Miaritra fitohanana. Tsemboka tokoa vao mihinana saingy tsy manelingelina ny hafa.
Manaraka ny lalana ara-dalàna tokony halehan’ny rehetra fa tsy mibodo ho tompon’ny arabe. Koa raha tena hanadio tokoa, na ny Kaominina Antananarivo renivohitra na ny Polisim-pirenena, dia ataovy mitohy mandavan-taona, ary raha ny tokony ho izy aza dia mila mizotra mankany amin’ny fanafoanana tanteraka an’itony fitaovam-pitaterana efa tsy manana ny toerany intsony amin’izao vanim-potoana idradradradrana ny fandrosoana izao. Sao ho tavanandro fotsiny indray fa handray vahiny. Mba hadiodio ny tanàna fa fetim-pirenena, dia avy eo hiverina amin’ny gaboraraka indray aorian’ny 26 jona. Raha ho avy tokoa ingahy Paul Kagame, Filohan’i Rwanda, dia manàna fahasahiana toa azy, jereo izay nataony fa tena nisy fangirifiriana niaretan’ireo vahoaka tokoa, saingy toa hoe mila miaritra raha te hanana ny tsara, hoy isika izay. Antananarivo no renivohitr’i Madagasikara, fitaratry ny firenena. Aza asiana kajikajy politika intsony koa fa andao iarahana ny fampamirapiratana azy !
Fitrandrahana angovo :: Handefa iraka ho any Alemaina ny fitondrana malagasy